I-SANTACO IKHATHAZEKILE NGOKUSWELA AMA-SANITISER - Ilanga News
Home Izindaba I-SANTACO IKHATHAZEKILE NGOKUSWELA AMA-SANITISER
I-SANTACO IKHATHAZEKILE NGOKUSWELA AMA-SANITISER
IKHALE ngesomiso sezibulalamagciwa-ne (hand sanitizers) ezitolo iSouth African Taxi Council (Santaco), KwaZulu-Natal, ethi kwale kancane ifike itshe lome inhlama njengoba ithole ezokugcina ukuqhuba umkhankaso wayo woku-gcina abagibeli nabashayeli bephephile kuso-mqhele (Coronavirus).
Izolo ngoLwesithathu amalungu ale nhlangano yamatekisi abephume ngothi lwawo ematasatasa erenki yaseNanda, eseThekwini, ekhuthaza inhlanzeko ukugwema lesi sifo esihlalise lubho-jozi umhlaba wonke.
Ithi ithenge izibulalamagciwane eziwu-500 esitolo. USihlalo weSantaco KwaZulu-Natal, uMnu Boy Zondi, utshele ILANGA ukuthi inhloso yalo mkhankaso wukukhuthaza inhlanzeko kubashayeli nabagibeli nokubaluleka kokugeza izandla.
Uthe le nhlangano ithenge izibulalamagciwane, kodwa nazo kazenele njengoba kuthathwe ezokugcina ebese zisele ezitolo.
“Ama-hand sanitizer kawasatholakali ezitolo njengoba abantu bewathenga ubuthaphuthaphu. Sinxusa izinkampani nabantu ukuba basixhase, basithengele ama-hand sanitizer ukuze abagibeli nabashayeli bezowasebenzisa njalo uma begibela etekisini.
“Amagciwane akhona yonke indawo, ematekisini imali iyadluliswa cishe yibona bonke abantu, kanti nayo inamagciwane ngoba idlula ezandleni zabantu abaningi.
“Sizohlangana noMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, namhla-nje (ngoLwesine) ngoba sifuna ukuba usihlanga-beze ngoba ngeke sikwazi ukwenza lo msebenzi sodwa, siyaludinga uxhaso lwawo.
“Ngalokhu sizama ukuvikela imiphakathi yethu,” kusho uMnu Zondi. Uthe abagibeli kumele baqikelele ukuthi amawindi ayavulwa ngaso sonke isikhathi ematekisini.
Umsakazi obikezela isimo sezimoto emigwa-qweni yakuleli, u-Ayanda Msweli, uthe inhloso yalokhu wukuba abantu bazivikele kulo mbhedukazwe.
“Sizohambela wonke amarenki KwaZulu-Natal, ukuze sizonikeza bonke abashayeli izinto zokuhlanza izandla, amagilavu nezimfonyo,” kusho uMsweli.
Previous articleIGcokama neziyalo ezijulile kuNtencane
Next articleKubhekwe isinqumo ngePSL